नाकामा निगरानी फितलो
वीरगन्ज/भैरहवा l छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वमै दोस्रो स्थानमा पुग्दा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्र उच्च जोखिममा पुगेका छन् । नाकामा स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा भारतबाट फर्किएका नेपाली सिधै घर पुग्दा संक्रमणले भयावह रूप लिने जोखिम बढेको छ ।
होली मनाउन गत चैत १४ मा भारतको हैदराबादबाट बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ छातापिपरा घर फर्किएका ३७ वर्षीय युवकको मंगलबार बिहान नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भयो । ज्वरो र रुघाखोकी आएपछि चैत २६ मा उनी वीरगन्जको एडभान्स मेडिकेयर भर्ना भएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएपछि चैत ३० को मध्यरात उनलाई नारायणी अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. सरोज रोशन दासले बताए ।
नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. नीरजकुमार सिंहका अनुसार संक्रमितमा निमोनियाबाहेक कडा खालको झाडापखालासमेत देखिएको छ । ‘होलीमा घर फर्किएका नेपालीसँगै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट प्रवेश भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश अस्पताल शंकास्पद संक्रमितले भरिएका छन्, जोखिम बढ्दो छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो एक साताको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नयाँ स्ट्रेनको सामुदायिक संक्रमण सुरु भइसकेको छ । ‘भयावह अवस्था रोक्न राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टी प्रवेश, कार्यकर्ता प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रममा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ...
विश्वासको मत पाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत, ओली पदमुक्त
राजीनामा दिएर आजै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने ओलीको तयारी
अल्टिमेटम सकियो, जुटेन ओली र नेपाल पक्षबीच सहमति